SiteCatalyst 15 mifanohitra amin'ny Analytics 10
Alahady, Martsa 13, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Manana mpanjifa izay mampiasa Omniture sy Webtrends izahay. Mazava ho azy, raha namaky ity bilaogy ity ianao dia fantatrao fa mpanjifa ny Webtrends. Fanambarana feno izany fa mety manana fomba fijery mitongilana amin'ny zavatra aho… saingy antenaina fa ny hijerena ireo interface interface vaovao novolavolaina ho an'ny kinova tsirairay dia hanome anao sakafo eritreretina.
Efa nolazaiko teo aloha fa ny olana amin'ny ankamaroan'ny Analytics Ny sehatra dia manome tatitra matetika izy ireo, saingy tsy manana ny fahaizany mampiseho fampahalalana amin'ny fomba jerena mba hahafahanao manao ny mety fanapahan-kevitra.
Ity ny fanatsarana farany farany an'ny Omniture SiteCatalyst 15 vokatra izay nampitaina tamin'ny alàlan'ny lahatsarin'izy ireo vao haingana.
Webtrends Analytics 10 dia manome UI vaovao izay be intuitive, voadio ary mora hitety. Ny UI dia natao ho an'ny interface click sy touch izay manome fomba tena mahomby hijerena ny angonao. Ny mpampiasa interface dia mampiasa sary kely mba hanomezana sarin'ilay fananana nomerika tadiavinao.
Webtrends koa dia manolotra Spaces - Ny habaka dia ny fampiharana, tranokala na ohatra an-tserasera izay tianao arahana. Mety ity ny pejy Facebook anao, ny tranokalanao, ny app Android-nao, sns. Spaces mandrindra auto-profiles. Ny profil dia efa niavaka tamin'ny Webtrends hatrizay, manome fahafaha-manao betsaka, saingy tamin'ny fandaniam-bola no niavian'izany. Ankehitriny, mipoitra ao amin'ny Spaces ny profiles.
Rehefa John Lovett nahita ny topi-maso, dia nataony tsara indrindra… "Toa Infographic io!". Heveriko fa milaza ny tantara iray manontolo… Webtrends Analytics 10 nivoatra mihoatra ny fanaovana tatitra ary mampiseho maso vaovao amin'ny fomba ahafahan'ny orinasa mandray fanapahan-kevitra.
Ny "toa infographic" dia tsy voatery hidera! 🙂
Na izany na tsy izany, ity fampisehoana mifanila ity no voalohany hitako, ary misaotra anao noho izany.
Iza no nanombantombana dimy taona lasa izay fa ny stodgiest of the stodgy (WT) dia hahatratra zavatra mahasarika amin'ny fomba hita maso. Averina indray fa ny "maso mamy" dia tsy voatery hidera.
Doug, antenaiko fa handinika lalina ireo interface roa ireo ianao… ny fahatakarana, ny fiasa ary ny fahafaha-manidina no kofehy tiako indrindra. Na angamba hanao izany koa aho, raha mahita ny fotoana. Sooo sahirana.
Ary, satria mazava tsara foana ny fanazavanao, dia tsy hampaninona anao ve ny miditra amin'ilay zavatra Spaces amin'ny lahatsoratra hafa ary manome ny fanehoan-kevitrao. Na manondro zavatra navoakan'ny WebTrends izay misy dikany.
Miala tsiny raha toa manery ahy aho, fa ny hafatrao sy ny anjara birikinao hafa dia tena tsara sy mendrika, um, manararaotra.
Mar 14, 2011 amin'ny 12: 46 AM
CGrant, mahafinaritra be ny manosika anao !!! Re: Infographic, tsy fantatrao hoe aiza no mety ho ratsy. Ny fampahalalana an-tsary dia fampisehoana an-tsary izay sady manambatra angona ary mampiseho azy tsy manam-paharoa mba hanomezana fahatsapana izay milaza 'ny tantara' kokoa. Topazo maso ireo sary roa etsy ambony… Iza amin'izy ireo no tena manome ny fahitana ny zava-bita sy ny tanjona kendren'ny fihetsika manokana momba ilay pejy resahina?
Mar 14, 2011 amin'ny 1: 11 AM
Eny, andao amin'ny pejy iray ihany ny famaritana.
Marina, ny dikan'ny infographic dia misy ny fikasana hitantara tsara kokoa ny tantara. Na izany aza, io teny io dia nanjary nidika ny zavatra tohodrano rehetra izay misy loko, sary, teny rahona na roa, haben'ny endri-tsoratra miovaova sy loko ao anaty sela, miampy ny zavatra rehetra dia tsy manaraka takelaka tsotra.
Ilay antsoina hoe "infografika" androany dia mampahatsiahy ahy ny andro voalohan'ny mpanonta laser rehefa nanomboka nanamboatra ny flyer azy ireo tsirairay avy tamin'ny fampiasana clip art sy endritsoratra toa ny adala, ka nahatonga ny fahatairana tsy misy kilema.
Ka andao hifikitra amin'ilay endriny tsara sy mendri-kaja amin'ny marika infographic izay misy ifandraisany amin'ny fahasosorana mifanohitra amin'ny haingam-pandeha na ny fironana.
Mar 14, 2011 ao amin'ny 10: PM PM
Miombon-kevitra amin'ny cgrant aho. Webtrends dia nandany fotoana be dia be tamin'ny famahana ny olan'ny maso "latabatra tsotra misy refy sy refy" amin'ny Webtrends 8 sy taloha. Azonao atao ny milaza fa nifantoka tamin'ny fanavaozana ny interface visual izy ireo satria ny famoahana farany azy ireo (9 sy 10) dia nifantoka tanteraka. Sure Webtrends 9 dia nampiditra endrika fanondranana angona lehibe (REST API, sns) fa raha ny fahitako azy, ny fiovana lehibe indrindra dia ny interface atrehin'ny mpampiasa.
Ity fanavaozam-baovao Analytics 10 farany ity dia azo antoka fa manadio kokoa, ary antenaina fa azo atao kokoa. Endri-javatra fanampiny iray izay voalaza tao amin'ny Engage dia ny pejy tsirairay ao amin'ny tatitra momba ny pejy dia hahazo dashboard azy manokana - izay tokony hahaliana indrindra ary mahasoa!
Mazava ho azy, ny Vovonan'ny Omniture tamin'ity herinandro ity dia nifantoka tamin'ny fanovana izay tsy nojeren'ny Webtrends hatrizay… Version 6? Miova ny sehatra aoriana! Ny fanavaozana ny SiteCatalyst 15 dia ho avy amin'ny fiovana ao ambadiky ny sehatra. Ireo fanovana ireo dia hahafahana manao karazana fahaiza-manao vaovao miaraka amin'ilay fitaovana; ireo fahaiza-manao izay tsy azon'ny Webtrends nofinofy mandra-panapa-kevitra ny hanavao ny Engine Processing-ny.
Iray amin'ireo fanovana lehibe ireo - Segmentation Instant. Azo antoka fa efa an-taonany mahery i Google Analytics no manana an'io, saingy tonga ny fotoana tokony hanarahan'ny fitaovana Enterprise. Miorina amin'ny fanambarana tao amin'ny Engage tamin'ny herinandro lasa teo, dia toa tsy noheverin'ny Webtrends akory ny fananganana tatitra na ny fizarana momba ny sidina. Te-hanampy fepetra vaovao amin'ny tatitrao? Mifandraisa amin'ny Administrator anao, izay mbola miatrika ilay interface mitovy aminy efa nifandraisany nandritry ny 4-5 taona lasa! Avy eo manapa-kevitra ny hamakafaka indray na hampiditra azy fotsiny amin'ny tatitra mandroso. Ny manampy ny Metrics ao amin'ny Omniture dia tsotra toy ny click-and-drag, ary toa vao maika hihamora kokoa - noho ny fanatsarana farany.
Raha mila lisitra feno momba ny fanatsarana ny Omniture ao amin'ny SiteCatalyst ao amin'ny Version 15, jereo ny lahatsoratr'i Adam Greco: http://adam.webanalyticsdemystified.com/2011/03/09/welcome-to-sitecatalyst-v15/
Aza adino ny mitsara ny boky amin'ny fonony. Satria ny Webtrends manana dashboard pejy tsara tarehy kokoa dia tsy midika hoe mora kokoa na azo atao izy io.
Fifandraisana ara-tsosialy sy finday an'ny Webtrends? Tsara izany izao!
Apr 9, 2011 ao amin'ny 12: PM PM
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny webtrends sy Omniture, dia ny fomba fitehirizana data. Ao amin'ny Webtrends dia mamakafaka rakitra ianao ary ny angon-drakitra momba izany dia tahirizina ao anaty rakitra fisie an-tsekoly taloha.
Ao amin'ny Omniture dia tahirinao ao amin'ny DB misy ifandraisany izany. Ireo fomba roa ireo dia samy manana tombony sy azo ampiharina.
1. Amin'ny tranokala Internet dia azonao atao ny mamerina mandinika ny angon-drakitrao. Manampy be amin'ny lafiny maro izany. Azonao atao ny mizaha toetra tsara ny fanamboarana anao na ny fanovana ny fanamboarana anao, azonao atao ny manangana tatitra vaovao ary miverina mijery ny fotoana, raha tsy miorina amin'ny masontsivana manokana. Ny mahazatra dia fidirana paghe amin'ny alàlan'ny pejy fanondroana, saingy misy ohatra an-taonina maro mahatonga izany mora ampiasaina. Na izany aza satria tsy mandeha amin'ny DB misy ifandraisany ny Webtrends, dia tsy azonao atao ny "Query" miaina ny db, amin'izay tianao. Tsy maintsy manangana ny tatitra ianao sy mamakafaka ny angona.
2. Ao amin'ny Omniture dia azonao atao ny miaina «fangatahana» data mivantana, satria mampiasa DB mifandraika ianao. Io dia mamela ny fizarana mivantana Discovery VS Site Catalyst. Midika izany fa tsy azonao atao ny mandanjalanja ny angon-drakitrao, noho izany dia sarotra kokoa ny fitsapana ary sendra olana ianao manandrana mandrefy ny zava-misy amin'ny fotoana lasa, izay mbola tsy namboarinao. Ary ny DB mifandraika dia misy fetrany ihany koa momba ny tahiry angon-drakitra ahafahany mitantana, ka mazàna (ary tsy manam-pahaizana momba ny Omniture aho, ka anaro aho) rehefa mihoatra ny fitsidihana an'arivony vitsivitsy, "santionany" ny data i Omniture mba hialana amin'ny fangatahana adala fotoana enta-mavesatra. Mety hametraka olana izany rehefa te hahazo ny angona marina fa tsy santionany data. Ny fizarazarana mivantana kosa dia tena milay tokoa ary iriko ny Webtrends farafaharatsiny ahafahana mampiasa ny ampahan'ny Webtrends analytics, rehefa nividy Segments (Discover counterpart of Webtrends)
Amin'ny ankapobeny, ny fizarana mivantana rehetra dia tena, manivana ny tatitra mifototra amin'ny lisitry ny ID cookie. Raha toa ny Webtrends Analytics dia mety tsy afaka mampihatra izany mora foana amin'ny Analytics 10, noho ny DB tsy mifandraika, dia afaka manangana mora foana amin'ny fahafaha-mampiasa ny ampahan'ny mpampiasa avy amin'ny fitaovany "Segments" izy ireo ho toy ny sivana amin'ny tatitra ao amin'ny Webtrends. Raha ny marina dia azonao atao izany, saingy mitaky anao ny fanondranana ny Segmentt izay safidinao ary manaova sivana tanana miaraka amin'ireo ID cookie rehetra ao aminy ary ampiasao izy io ho toy ny sivana ihany.
Noho izany, misy ny mahatsara sy maharatsy ny fanamboarana roa. Dinika mahaliana izy io, izay tokony ho tian'ny olona iray.
Apr 11, 2011 ao amin'ny 5: PM PM
Tsy azonao antoka raha fantatrao ny momba ny Webtrends Visitor Data Mart - manova ny fisie fisie avy amin'ny Analytics mankany amin'ny tahiry ifandraisana izay azonao ampiasaina amin'ny fangatahana ad-hoc na koa amin'ny fizarazarana eny an-dalambe amin'ny alàlan'ny Segments interface. Raha azoko atao ny mampitaha dia azo atao sy azo ovaina kokoa io raha oharina amin'ireo ampahana ao amin'ny Google Analytics sy Site Catalyst. Visitor Data Mart dia "add-on" amin'ny Analytics ka mbola manana interface iray, fitantanana iray sns ianao. Heveriko fa izany no fomba tsara indrindra ahafahanao mampiasa ireo fisie fisaka namboarina ho tatitra (oh: tsy misy santionany) sy ny tahiry ifandraisan'ny fisarahana sy asa hafa "an-tserasera".
Apr 23, 2011 ao amin'ny 4: PM PM
Fantatro tsara ny VDM & Segments, fa ny tetezana miverina amin'ny Analytics dia mbola tsy namboarina. Tsy azonao atao ny mijery anio ny ohatra ny fizotran'ny fiovam-ponao, ny fandalinana ny làlan-kalehanao, ny fampielezana ny fampielezan-kevitrao na ny tatitra an-tserasera hafa amin'ny Webtrends Analytics ho an'ny Segment voafaritra ao amin'ny Segments & VDM.
Raha ny tena izy, ny fampidirana manokana dia azo namboarina mora foana, amin'ny alàlan'ny fampidirana sivana miorina amin'ny lisitry ny ID Cookie avy amin'ny Segments. Ka andao hatao hoe nanangana Segment amin'ny VDM & Segments ianao. Ity fizarana ity dia mpitsidika rehetra ao amin'ny tranokalan'ny banky manana karama isan-taona mihoatra ny 100.000 $ izay efa mpanjifa, nefa tsy manana fifanarahana momba ny fisotroan-dronono ary izay nanindry doka momba ny fisotroan-dronono fanampiny tao anatin'ny 30 andro lasa.
Te hahita ireo pejy tian'ity Segment ity ianao, ny fomba fitetezan'izy ireo ny profil profil an'ny mpanjifa ary ny toerana hivoahany ny sehatr'izy ireo amin'ny banky web. Amin'izao fotoana izao, tsy azo atao izany. Azonao atao ny manangana ny Segment, fa tsy afaka mampiasa izany Segment izany amin'ny Analytics ianao ho toy ny sivana. Ny hany ilainao dia ny ID Cookie an'ny segondra manokana natondrana avy amin'ny Segments ary noforonina ho toy ny sivana sy voila, azonao ny tatitra ataonao.
Izany no singa lehibe ampiako, raha afaka manapa-kevitra aho. Ny segment dia vokatra mbola mahatalanjona ary intuitive mampino. Saingy mila afaka mamerina ilay fizarana miverina ao amin'ny sehatra analytics ianao.
Mar 14, 2011 amin'ny 1: 20 AM
Noho izany, momba ny tsy fahombiazana. Raha mijery akaiky ny tsirairay aho dia milaza fa ny mpamorona WebTrends dia nanao safidy tsara kokoa momba izay hananana an'ity efijery fanokafana ity… na dia azo hatsaraina ihany aza. Raha mba naseho ireo efijery ireo ho an'ny fitantanana aza aho, ny WebTrends dia nanangana fifanakalozan-kevitra tsara lavitra kokoa ary hiteraka fanontaniana manokana kokoa ho an'ny fanadihadiana fanampiny.
Ny WebTrends dia mety hanana fiheverana tsara kokoa amin'ny fitantanana. Sahia milaza aho fa ny olon-tsotra eo amin'ny fitantanana anao dia sahala amin'ireo mpampifanaraka fironana toa azy ireo amin'ny angon-drakitra tsara?
Mar 14, 2011 amin'ny 1: 21 AM
Hmm, ny fanehoan-kevitro faharoa dia aseho eo ambonin'ny hevitro voalohany amin'ity interface ity. Tokony vakiana amin'ny filaharana ambany sy ambony izy ireo.
Mar 18, 2011 ao amin'ny 5: PM PM
Raha misy zavatra iray tsy azonao iampangana ny Webtrends dia tsy fahaizanao mandanjalanja. Fitaovana mora volavolaina indrindra hatrizay
Heveriko fa very ATM ATM i Omniture.
Afaka mahita analytics 10 bebe kokoa ianao amin'ny http://www.Webtrends.com/analytics10
Manantena an'izany aho.